कुन राशिलाई कुन व्यापार शुभ ? कुन बिषय रोज्दा ठीक ? – Pahilo Page
३० पुष २०७८, शुक्रबार ०६:४८ 88 पटक हेरिएको
मिथुन : यो राशिका व्यक्तिले प्राध्यापक, शिक्षक, कवि, गीतकार, संगीतकार, प्रवचनकर्ता, ज्योतिषी, गणित, केमेस्ट्री, जिओलोजी, अकाउण्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स, बैकिङसँग सम्बन्धित बिषय छान्दा उत्तम हुन्छ । यिनै क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापारमा मिथुन राशि भएकाले प्रवेश गर्दा अधिक सफलता मिल्छ । अधिक सफलता प्राप्त गर्न यो राशि भएका व्यक्तिले हरियो कपडा लगाउन आवश्यक हुन्छ । यो राशिका व्यक्तिलाई मुंग दालको सेवन र दान उत्तम मानिन्छ भने सूर्यको पूजनले अधिक फल दिन्छ।
कर्कट : यो राशि हुने व्यक्तिका लागि जलीय वस्तु, सख्खर, चामल, चाँदी, शिक्षण, वस्त्र, स्त्रीको कपडा, रेशम, सौन्दर्य सामाग्री, रंग, उपकरण मर्मतको काम, कमर्स, आर्ट, जिओलोजी, म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर सम्बन्धी बिषय छनौट गर्नु उचित हुन्छ । यी बिषयसँग जोडिएको नोकरी र व्यापार कर्कट राशि हुनेहरुका लागि फाप्छ । अत्यधिक सफलताका लागि यो राशि भएका व्यक्तिले सेतो कपडा लगाउनुपर्छ । शिव र नारायण भगवानलाई चामलको भोग दिनुपर्छ भने चामल आफूले सेवन गर्दा अझ उत्तम मानिन्छ ।
सिंह : यो राशि भएका व्यक्ति निकै प्रतिभाशाली हुन्छन । यो राशि भएका व्यक्तिहरुका लागि करिब–करिब सबै खालका व्यवसायमा सफलता प्राप्त हुने योग हुन्छ । यो राशि भएका व्यक्ति एड्भाइजर, ज्योतिष, इञ्जिनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक, सेनामा बढी सफल हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्तिहरु निकै कुशल मेनेजर समेत बन्न सक्छन् । यी व्यक्तिका लागि सबै बिजिनेश विषय अनुकुल हुन्छ । कमर्स, अकाउण्ट र कानूनमा पनि अधिक सफलताको संभावना हुन्छ । अत्यधिक सफलताका लागि यो राशि भएका व्यक्तिले आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ गर्नुको साथै रातो रंगको कपडा लगाउनु लाभदायक हुन्छ ।
धनु : यो राशि भएका व्यक्तिका लागि नाट्य, ललितकला, सुनचाँदीको व्यवसाय, किराना, सामाजिक सेवा, अध्यात्म गुरु, म्यानेजर, होटल, स्कूल संचालक लगायतको क्षेत्र शुभ मानिन्छ । विज्ञान, गणित, कमर्स, अकाउण्ट एवम् सबै बिषय यो राशिका लागि अनुकुल मानिन्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले अधिक सफलता पाउन पहेंलो रंगको कपडा लगाउनुहोस् भने आफ्ना गुरुलाई सम्मान गर्दै गुरुमन्त्रको जप गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
मकर : यो राशि भएका व्यक्ति मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक, राम्रो खोजकर्तामा जम्न सक्छन । यस्ता व्यक्तिका लागि गणित, फिजिक्स, केमेस्टी, संस्कृत भाषा, अकाउण्ट, म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी बिषय शुभ मानिन्छ । अत्यधिक सफलताका लागि कालो रंगको कपडा लगाउनुपर्छ भने हनुमानजीको पूजा अर्चना गर्नुपर्छ ।
कुम्भ : यो राशि भएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्र अधिकांश मकर राशिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । किनभने यी दुवै राशिको स्वामी शनि हो । यसका अतिरिक्त सेना, टेक्निकल, मेडिसिन क्षेत्रमा समेत सफलता प्राप्त हुन्छ । वनस्पति शास्त्र, गणित, फर्मा, इलेक्ट्रिकको बिषय समेत उत्तम हुन्छ । अधिक सफलताका लागि कालो वस्त्र लगाउने गर्नुहोस् र हनुमानजीको पूजा अर्चनामा ध्यान दिनुहोस्।
(विभिन्न धार्मिक ग्रन्थकाे सहयाेगमा)